ကောက်ညှင်းဝက်သားလုံးပေါင်း easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကောက်ညှင်းဝက်သားလုံးပေါင်း easy cook
Posted by weiwei on Aug 11, 2014 in Food, Drink & Recipes | 22 comments
ဇီဇီရဲ့ စတစ်ကီရိုက်တွေကို တွေ့ပြီး သတိရမိတာလေးတစ်ခု စမ်းလုပ်ကြည့်တာပါ။ စိနတိုင်းမှာနေခဲ့စဉ်တုန်းက စားခဲ့ဖူးတာလေးကို ပြန်အောက်မေ့ပြီး တီထွင်ထားတဲ့ menu တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကောက်ညှင်း … ဆန်ချိန်ခွက် ၁ ခွက်
၀က်သားကြိတ်ပြီးသား …. ၃၀၀ ဂရမ် (၂၀ ကျပ်သားခန့်)
သကြား … တစ်ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် .. အကြည်/အနောက်
ဂျုံမှုန့် …. ၂ စွန်း
ကြက်သွန်မြိတ် … ၂ ပင်ခန့်
နှမ်းဆီ .. လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် .. အနဲငယ်
ကြက်ဥ (သို့) ဘဲဥ … တစ်လုံး
ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေဆေးပြီး တစ်ညရေစိမ်ထားပါမယ်။
၀က်သားလုံးအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောနယ်ပါမယ်။ အပေါ့အငံနဲ့ အရသာကို အဆင်ပြေသလို ညှိပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ၀က်သားအလုံးလေးတွေလုံးပြီး ကောက်ညှင်းနဲ့ကပ်ရပါမယ်။ များများကပ်နိုင်ရင် ပိုလှမှာပါ။ ကျွန်မကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်တာမို့လို့ သိပ်မလှဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ပေါင်းအိုးထဲထည့်ပြီး နာရီဝက်ခန့်ပေါင်းလိုက်ရင် ရပါပြီ။
ဒါက အဆင်သင့် အနေအထား
အသားနဲ့ ကောက်ညှင်းကို ဒီလိုပဲ ကပ်လိုက်ပြီး ပေါင်းမယ်
ကောက်ညှင်း ရယ် ဝက်သားရယ် ကိုယ့် အကြိုက်ကြီးပဲ။
အစားရှောင် ကာလမို့။ ဂစ်ဂစ်
ဒါက ဇီဇီအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တကူးတက ချက်ပြပြီး တင်ပေးထားတာနော် ..
၀က်သားကောက်ညှင်းထုတ်လုပ်ဖို့ အခုထိ ၀ါးရွက်မ၀ယ်ရသေးတာနဲ့ ၀က်သားနဲ့ကောက်ညှင်းပါတဲ့ ဒီဇိုင်းဆန်းလေးနဲ့ အရင်လုပ်ပေးလိုက်တာ ..
အာ့ဆို ဒီ ပိတ်ရက်လုပ်စားလိုက်တော့မယ်။
သများကို ဝအောင်လုပ်နေတာ ဒီ စားဖိုမှူးတွေပါတော့။
ဒီလိုပုံစံကတော့ မစားဘူးသေးဘူးဗျ၊ ၀က်သားကောင်းညှင်းထုပ်ဘဲ စားဖူးတာ။ ဒီလိုကတော့ အသားပိုမယ်ထင်တယ်နော်။
ဒီလိုပုံစံမျိုး တရုတ်ပြည်မှာပဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။ တစ်မျိုးထဲကို အများကြီး အ၀စားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ မနက်စာ ဒင်းမ်စမ်း စားသလိုမျိုးဖြစ်လို့ အသားများပေမယ့် အများကြီး မစားဖြစ်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ။
သွားရည် တမျှား မျှားကျ အောင်လုပ်နေသလိုဘဲ
အိမ်ဘေးက ရှမ်းတရုတ်တွေကတော့ သာကူစေ့တွေထဲ ထာပနာထည့်ပြီးပေါင်းထားတာပဲ ကျွေးဖူးတယ်.. မဝေနည်းနဲ့လုပ်လည်း ရမရတော့မသိဘူး.. သူ့ဟာကတော့ မုန့်လုံးကြီးလိုမျိုး သာကူစေ့တွေအများကြီးဖြစ်နေတာ..
သာကူစေ့တွေနဲ့ လုပ်တဲ့နည်း နွေးသီး တစ်ခါ တင်ဖူးတယ် …
သူ့နည်းအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ဖူးတယ် .. ဒါပေမယ့် ပုံပျက်သွားတယ် .. သာကူစေ့တွေက ကိုင်တွယ်ရခက်တယ် ..
သာကူ​စေ့ကို ​ရေကြာစိမ်​ပြီး မုန့်​လုံးလုံးသလိုလုံးပြီး အစာသွပ်​ရင်​ ကိုင်​ရမခက်​ဖူး မ​ဝေ
အဖေ့ကို ၀ိတိုရီယတောင်သွားဖို့ ပြောထားတယ် ..
လာမယ့် သင်္ကြန်ပိတ်ရက်လောက် သွားဖြစ်မယ်ထင်တယ် ..
မယ်ပုရဲ့ ကိတ်မုန့်လက်ရာတွေ သိချင်သေးတယ် … ကိတ်မုန့်လှလှလေးတွေ လုပ်ချင်တယ် .. အမကတော့ အီးဇီးလောက်ပဲ လုပ်တတ်တာ ..
ကျနော့်ဘ၀ကတော့… မြင်သာမြင်ရ… မစားရတဲ့ ဘ၀လေးပါ… ။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်.. လုပ် ပေးမယ့်သူမရှိလို့ … ။
ဖွေးဖွေးဆိုနင်လုပ်ကျွေးရမှာပေါ့။ သူကလုပ်ကျွေးပါ့မလားဟယ်။ စင်းစင်းစားစားပြောဘာ
သားတော်လေးက… သူ့ ကို လုပ်ကျွေးမယ်လေ…
သူက..သားတော်လေးကို.. အာ့မျိုး.စားကောင်းသောက်ဖွယ်လေးတွေ… ပြန်လုပ်ကျွေးပေါ့.. ။
ပြန်…လုပ် မကျွေးလို့ ကတော့..ဒေါ်ဖွားမေနဲ့ .. နောက်မီး လင်းထည့်လိုက်မှာ..
သာကူစေ့တော့လုပ်ဖူးတယ်။ စားကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောက်ညှင်းပိုကြိုက်လို့ဒါပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ လုပ်စားကြည့်အုံးမယ် :sar:
ကူးသွားပါသည်​။ အနဲငယ်​မဟုတ်​ပါ။ အနည်းငယ်​ပါ။ အန်​တီမမ ကိုယ်​စား​
ကျေးဇူးပါ မှီရေ .. အသံထွက်တဲ့အတိုင်း ရေးမိသွားတယ် ..
တခါလောက်တော့ စမ်းကြည့်ပါဦးမယ် ပုံထဲမှာမြင်နေရတာနဲ့ တင်
စားချင်စိတ်တွေပေါက်နေပြီ အစ်မဝေ ရယ်
အိမ်ပြောင်းပြီး ပေါင်းအိုး အတွက် ခံ တဲ့ ဇကာ ပျောက်နေတာ ပြန်မရှာနိုင်သေး။
အမြန်ရှာပြီး ကျောက်စ် ရဲ့ ပေါက်စ် နဲ့ ဝေ့ ရဲ့ ကောက်စ် ကို ပေါင်း လုပ်ကြည့်မယ်။
ကျောက်ရဲ့ပေါက်စ်က မွှေစက်မရှိရင် အတော်ပင်ပန်းတယ် အရီးရေ .. (ကိုယ်တွေ့)
ကျွန်မရဲ့ ကောက်စ်က လွယ်တယ် .. ကောက်ညှင်းဆန်များများကပ်အောင် ကြက်သားလုံးပြီးတဲ့အခါ ကြက်ဥခေါက်ထားတဲ့အရည်နဲ့အရင်စိမ်ပြီးမှ ကောက်ညှင်းကပ်ရင် ပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် … အခုလုပ်ထားတာက ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေလို့ ကောက်ညှင်းနည်းသွားတယ် ..
ဖဘမှာ တွေ့ကတည်းက ဒါလေး ဘယ်လိုများ လုပ်ရလဲမေးချင်နေတာ..မဝေရေ…။ ခုတော့ ဆုတောင်းပြည့်သွားတယ်..။ အိမ်မှာပိတ်ရက်လေး ဒါမျိုးလုပ်စားဖို့ ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်…